MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE BOXAPOINT IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Boxapoint iyo Sawiro
Feeryahan / Jarmal tilmaame Shorthaired Points oo isku dhafan eyda
'Kani waa iskudhafkeyga Boxer / Jarmal ee Shorthair (Boxapoint). Iyadu waa a aad u firfircoon iyo eey ciyaar badan. Waxay tahay 2 1/2 sano jir hadda. Waxay jeceshahay inay ku ciyaarto kaliya alaabada carruurtu ku ciyaarto ee qaylada. Waxay sidoo kale aadi doontaa barxadda oo waxay 'farta ku fiiqeysaa' bawadeeda hore sida tilmaanta oo kale. Waxay jeceshahay: carruurta, kubbadaha, buskudka (daaweynta), raacida baabuurta, socdo , harada. Waxay neceb tahay: qubayska !, eeyaha kale ee ku soo boodaya iyada. Waxay sidoo kale la legdami doontaa ninkeyga oo waxay ku kici doontaa lugaheeda dambe iyo 'sanduuqa'. Waxay leedahay isku dhafka labada shaqsi. Iyadu ma laha dhibaatooyin caafimaad oo dhab ah, laakiin iyadu waxay leedahay xasaasiyad xilliyeed. Waxay ku jirtaa cuntada eyda dabiiciga ah, waana inaan siino Benadryl iyo steroids mar mar. Guud ahaan, iyadu waa eey aad u wanaagsan, waxaanan ka heli lahaa isku dhafkan isku dhafka ah ee garaaca wadnaha markale. Magaceedu waa Charlotte waxayna ku dhalatay Utah. Hooyadeed waxay ahayd Jarmal Shorthair aabaheedna wuxuu ahaa Feeryahanka. Qoysku waxay lahaayeen labada eeyo, oo qiyaastii 15 daqiiqo ka hor intaysan bixin si ay u soo baxaan Jarmal Shorthair iyo mid kale, Feeryahankooda ayaa u yimid iyada.
Jarmal Shorthaired Boxapoint
Boxapoint ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Feedhyahan iyo Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Charlotte, Feeryahan / Jarmal Shorthaired Pointer Poyter dog dog (Boxapoint) oo ku ciyaaraya alaabteeda.
Charlotte, Feer / Jarmal Shorthaired Pointer Poyter dog dog (Boxapoint) oo raba inuu sanka ka helo xayawaan.
Charlotte, Feeryahan / Jarmal Shorthaired Pointer Pointer hy dog ​​(Boxapoint) oo ku seexanaya alaabta caruurtu ku ciyaarto.
Charlotte, eeyaha Feeryahan Jarmal Shortyired Pointer Poyter (Boxapoint) oo leh cunugga.
Charlotte, Feeryahan / Jarmal Shorthaired Pointer Poyter ey (Boxapoint)
madaw jarmal madow iyo cadaan gaaban
'Roxy waa Boxapoint aad u macaan. Waxay tahay 3 bilood sawirkaan. Waxay jeceshahay la kulanka dad cusub waxayna ku fiican tahay carruurta, laakiin iyadu waxay leedahay caado u boodboodaya iyaga on markay guriga soo galayaan. Waxay jeceshahay alaabteeda jilicsan, oo ku ciyaaraya ardaaga, iyo hareeraha eeyaha deggan. Waxay neceb tahay eeyaha kale ee isku daya inay ku bood iyada oo iyada leefleefi. Iyadu waa, inta badan, guri burburay laakiin waxay la kulmi doontaa shil marmar ah. Waxay leedahay maalinle ah socod hal mayl ah , intaa ka dib iyadu marwalba waxay diyaar u tahay hurdo fiican, dheer. '
Roxy the Boxapoint puppy at 3 bilood jir
Butkus iskudhafka Boxapoint sida eey ah— 'Tani waa Butkus. Waxaan ka soo korinay hoyga maxalliga ah markii uu jiray 8 toddobaad. Wuxuu dhashay Maalinta Jacaylka. Waxaa naloo sheegay in hooyadiis ay tahay feeryahan caan ah aabehiisna uu ahaa Tilmaame. Wuxuu ku jiray a qashinka 3 : isaga, lab iyo dheddig kale. Labadii kale ayaan ka soo xushay maxaa yeelay isagaa keligiis aan boodayn ama aan nixin. Nooc kaliya ah ayaa iska fadhiistay isagoo i fiirinaya halka walaalkiis iyo walaashiis ay igu qubeen liqsi iyo nips. Waan soo qaaday kadib isla markiibana waxaan dareemay isku xirnaan waxaana ku jeclahay isaga ilbiriqsiyo yar gudahood. Wuxuu ahaa 15 rodol, 9 oz. markii aan gurigiisa geynay isaga oo 8 toddobaad jira. Seddex bilood ka dib baaritaankiisii ​​3-aad ee dhakhtarka xoolaha, wuxuu ku miisaamay 53 lbs. '
Butkus isugeynta Boxapoint sida eey
Butkus iskudhafka Boxapoint sida eey ah— 'Waa eey wanaagsan-jecel, daryeel, daacad ah LAAKIIN weli aad buu u eey u yahay! Waan la shaqeyneynaa isaga sifiican ayuu ula shaqeynayaa amarro: fadhiiso, joog, qaniinyo la'aan . Waxaan ka shaqeyneynaa wali 'kaalay'. Wuxuu ku fiicnaadaa daweynta oo 'ka tagaa' oo 'qaataa.' Waa nin firfircoon oo hubaal waa aad u deggan marka uu maalin kasta lugeeyo . Si kastaba ha noqotee, boodboodku waa hubaal dhaqan aan u baahanahay inaan JOOJino! Isagu waa gurijoog ah oo wuxuu bartay inuu albaabka u soo dhowaado oo uu halkaa istaago laakiin isagu ma sameeyo buuq marka waan daawaneynaa markuu guriga joogo haddii uu albaabka joogo, wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo 'ganacsi.' Waxaan bilaabay tababarka sanduuqa 3 bilood gudahood taasna wax weyn ayey ka bedeshay. Habeen walba wuxuu ku jiraa sanduuqa. Si wanaagsan ayuu u socdaalaa, baabuurka wuu jecel yahay carruurteenana wuu ku wanaagsan yahay. Waxaan leenahay 2 bisadaha sidoo kale waa mid aad u xiiso badan oo ciyaar badan laakiin aan dagaal ku jirin iyaga. Gabi ahaanba waan jecel nahay isaga. '
madow iyo caddaan yar yar sernard
ey ey u egyihiin coyotes
mini pinscher iyo isku dhafka chihuahua